कतिपय उद्योग व्यवसाय कोरोनाकै समयमा पनि राम्रो अवस्थामा रहेकाले नयाँ पारिश्रमिक दिन सकिँदैन भन्न नमिल्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘२ वर्षमा हुनुपर्ने ३ वर्षको अवधिमा निर्धारण गरिएको छ,’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘नयाँ पारिश्रमिक दिन रोजगारदाताहरू अनिच्छुक हो भने मजदूरहरूलाई सिद्रा बनाउने कारखाना किन खोल्नुपर्‍यो ?’ रोजगारदाताहरूले कोभिडको बहाना देखाएर सरकारले निर्धारण गरेको मजदूरहरूको पारिश्रमिक दिन सकिँदैन भन्नु गलत तर्क भएको भन्दै उनले अहिले पारिश्रमिक भारी कटौती गर्दा पनि मजदूरहरूले आवाज नउठाएको बताए । रोजगारदाताहरूले पारिश्रमिक दिन नसक्ने हो भने प्रतिष्ठान तथा सम्बद्ध ट्रेड युनियनबीच भएका छलफल र आपसी सहमति लागू हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘कोरोनाकै अवस्थामा पनि कतिपय उद्योग प्रतिष्ठानहरू राम्रो व्यवसाय गरिरहेका छन्, त कतिपय अप्ठ्यारोमा पनि छन्, जस्तै पाँचतारे होटेलहरू बन्द हुँदा त्यहाँका श्रमिकले मासिक रू. ३ हजारदेखि रू. ५ हजारसम्म पारिश्रमिक लिएर काम गरेकै त छन् नि,’ श्रेष्ठले भने । सोमवार प्रकाशित राजपत्रअनुसार न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक महँगी भत्तासहित मासिक रू. १५ हजार पुर्‍याइएको छ । श्रमिकले पाउने दैनिक पारिश्रमिक रू. ३६१ मा महँगी भत्तासमेत जोडेर रू. ५७७ पु¥याइएको छ । प्रतिघण्टाको ज्याला रू. ४८ भएकामा महँगी भत्ता रू. २९ जोडेर रू. ७७ पुर्‍याइएको छ ।
रेल चलाउन ल्याइयो अध्यादेश[२०७८ बैशाख, २३]